Wararka Maanta: Jimco, May 6 , 2022-Dowladda Soomaaliya oo mudo kordhin ka codsatay Hay'adda IMF
Bil kasta, waxaa jira gaabis $10m farqiga u dhexeeya dakhliga dowlada soo gala iyo midka ka baxa. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka, waxay joojiyeen taageeradii miisaaniyadeed ee ay siin jireen Soomaaliya, ka dib doorashooyinkii dib u dhacay. Dib u dhacyadan awgeed, deeqaha taageerada miisaaniyada 2021 waxay ahaayeen oo kaliya US$38 milyan, marka la barbar dhigo US$170 milyan oo la filayey miisaaniyada inay gasho. Ilaa hadda, dhaqaalaha la siiyo Soomaaliya oo qayb ka ah qoondada IMF ee 2021 (SDR157 milyan) ayaa kaabid u ah dakhli-yaridaas, laakiin taageeradaas ayaa dhammaan doonta dhowr bilood gudahood haddii aanay Soomaaliya helin kabka misaaniyadda deeqbixiyeyaasha.
"Dib u dhaca doorashada iyo dakhliga dowladda oo yaraaday ayaa ka mid ah sababaha keenay inay dowladu codsato muddo kordhinta barnaamijka dib u habeynta maaliyada IMF ka caawiso Soomaaliya." ayaa lagu sheegay waraaqda.
Kaalmo Saddex sano soconeysa, gaareysana ku dhawaad $400-milyan (380-milyan Euro) oo hay’adda IMF ugu talogashay inay ku taageerto barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ayaa si automatic ah meesha uga bixi kara, haddii aan la dhameystirin hanaanka dib u eegista maaliyadda Soomaaliya, ayaa yiraahdeen khuburo dhanka maaliyadda ah oo HOL la hadlay.
Dib u dhacani ayaa la leeyahay wuxuu keeni karaa inuu halis galo barnaamijkii deyn cafinta Soomaaliya iyo kaalmooyinka kale ee mashaariicda horumarinta iyo kabka misaaniyadda Soomaaliya.
Lama oga inay IMF oggolaan doonto iyo in kale, hayeeshee mudada loo qabtay Soomaaliya ayaa waxay sabab u ahayd dedejinta guddiga doorashada oo shalay ku dhawaaqay in 15-ka bishaan May la qabto doorashada Madaxweynaha.